ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေ ပိုးကြာဖြူခင် – XB Media & News
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိတ်တွေက “ဆိုင်းမိုင်”လို့ခေါ်ကြတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်တွေ အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဆိုင်းမိုင်လေးရဲ့ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်းမိုင်လေးကတော့ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ အသက် (၂၉)ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday ပါ ဆိုင်းမိုင်လေးရေ ဒီထက်မက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိပါစေ ဒီထက်မကလည်း အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုမိုရရှိပါစေလို့ CeleGabar ကနေမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဆိုင်းမိုင်လေးရေ….
ဆိုင်းမိုင်လေးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့အမှတ်တရပုံလေးတွေကို မျှဝေထားခဲ့ပြီး CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေ အတွက် ဆိုင်းမိုင်ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဆိုင်းမိုင်လေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Photo Credit – Poe Kyar Phyu Khin
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိတ္ေတြက “ဆိုင္းမိုင္”လို႔ေခၚၾကတဲ့ ပိုးၾကာျဖဴခင္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေ ပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္ေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ဆိုင္းမိုင္ေလးရဲ႕ ေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုင္းမိုင္ေလးကေတာ့ ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ အသက္ (၂၉)ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Happy Birthday ပါ ဆိုင္းမိုင္ေလးေရ ဒီထက္မက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ရရွိပါေစ ဒီထက္မကလည္း အႏုပညာေ လာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုမိုရရွိပါေစလို႔ CeleGabar ကေနေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္ ဆိုင္းမိုင္ေလးေရ….
ဆိုင္းမိုင္ေလးက သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေမြးေန႔အမွတ္တရပုံေလးေတြကို မွ်ေဝထားခဲ့ၿပီး CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြ အတြက္ ဆိုင္းမိုင္ရဲ႕ ေမြးေန႔အမွတ္တရပုံေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း ဆိုင္းမိုင္ေလးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေ လးေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဆိုတော် ရေမွန်နဲ့ ဆင်လွန်းတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေ အံ့အားသင့်နေရတဲ့ နိုင်ငံခြားသရုပ်ဆောင် တဦး